Biraon'ny Birao Ny habaka amin'ny tranokala dia tsy mihetsika ary tsy mivaona noho ny rindrina ivelany amin'ilay trano. Noho izany, ny mpanaingo dia mampihatra ny foto-kevitra momba ny tsipika mikoriana amin'ity tranga ity miaraka amin'ny fanantenana hamorona fahatsapana mikoriana ary farany niova ho tsipika mikoriana. Voalohany dia noravanay ny rindrina ivelany teo akaikin'ny korondram-bahoaka ary nampihatra faritra telo izahay, nampiasaina mandeha izahay mba hivezivezy ireo faritra telo ary ny tsipika dia ny fidirana ivelany ihany koa. Mizara departemanta dimy ny orinasa, ary dimy izahay no mampiasa azy.
Endrika Fampirantiana / Varotra
Endrika Fampirantiana / Varotra Izy io no sady mamolavola ilay fotokevitra sy ny hevitra momba ny fampiasa an-tsary izay mahatonga ny fampirantiana «dieForm». Ny vokatra rehetra amin'ny fampisehoana virtoaly virtoaly dia aseho. Ny mpitsidika dia variana amin'ny vokatra, tsy avy amin'ny dokambarotra na ny mpiasan'ny varotra. Ny fampahalalana fanampiny momba ny vokatra tsirairay dia azo jerena amin'ny fampisehoana multimedia na amin'ny alàlan'ny kaody QR ao amin'ny efitrano fampisehoana virtoaly (fampiharana sy tranonkala), izay azo andiana marika ihany koa ireo vokatra. Ny foto-kevitra dia mamela ireo vokatra marobe mampientam-po ho aseho mandritra ny fanamafisana ny vokatra fa tsy ny marika.
Ny Atiny Eran-Tany Ara-Barotra Mitsangatsangana Momba Ny Toyota
Ny Atiny Eran-Tany Ara-Barotra Mitsangatsangana Momba Ny Toyota Aingam-panahy avy amin'ny fitsipiky ny Japoney momba ny "tony milamina", ny famolavolana dia manambatra ireo singa manambatra sy ara-pihetseham-po ao anaty orinasa iray. Ny maritrano dia mijery minimalistic sy milamina avy any ivelany. Na izany aza dia afaka mahatsapa hery mahery vaika miainga avy amin'izany ianao. Eo ambany ery ianao dia mikitikitika ny anatiny. Rehefa tafiditra ao anatiny dia mahita ny tenanao ianao ao anaty tontolo mahagaga goavam-be miaraka amin'ny angovo ary feno rindrina fampahalalam-baovao lehibe maneho sary mihetsika mahery vaika sy mahasosotra. Amin'izany fomba izany, ny fitsanganana dia lasa traikefa tsy hay hadinoina ho an'ny mpitsidika. Ny foto-kevitra dia mampiseho ny fifandanjan'ny asymmetrika hitantsika eo amin'ny natiora sy any amin'ny fon'ny aesthetika japoney.
Fivarotana Misy antony vitsivitsy napetrako ny rindrina taloha (30 metatra). Ny iray, dia ny tsy fahazoana ny haavon'ny trano misy ary tsy nahazo alàlana hikasika an'io aho! Faharoa, tamin'ny fanakonana ny fivoarana teo alohan'ny fidirana, dia nahatratra 30 metatra ny rindrina misy rindrina aho. Araka ny fandaharam-peo nataoko isan'andro, ny ankamaroan'ny mpivarotra dia nisafidy ny hiditra ao anaty fivarotana fotsiny noho ny fahalianana, ary mahita ny zava-mitranga ao ambadik'ireny endrika manaitra fanta-daza ireny.
Talata 15 Jona 2021
Ny Trano Fisakafoanana Ilay volavolan-dalàna momba ny fikomiana. Ao amin'ilay zotra fitohanana be dia be no miorina. Ny drafi-pandaminana ankapobeny dia mikendry ny hamorona haingam-pandeha sy mahamety kokoa, toy ny hamporisika ny fotoana hihisatra sy ao anatin'ity fiainana an-tanàn-dehibe ity mba hifalifaliana isaky ny fotoana eto. Ny habaka malalaka, araka ny niforona, tamin'ny alàlan'ny drafitra antonony, dia mizara ny habaka mifototra amin'ny fiasa samihafa. Ny efijery mitovy habe dia manampy amin'ny fientanentanana ao anatin'ny fahalalahan-tsaina mampientam-po.
Ny Trano Fisakafoanana Ny fahafinaretan'ny fiainana ny zavakanto. Fanitarana sy fanohizana. Asehoy ny fanitarana ny lokon'ny valindrihana sy ny fanitarana ny gorodona ary ny tsy fanarahan-dia amin'ny fanaovan-dàlana tsy miovaova, izay mandeha tsara eto na tsy manjary ao, maneho taratry ny hetsika iray izay ahitana ireo tampoka sy lohasaha amin'ny fiainana. Na dia mikoriana sy mihetsika aza ny filamatra ao anaty, dia misy kosa ny sary mahafinaritra manoloana ny habakabaka. Rivotra ary mangarahara ny taxi-habakabaka, raha mitazona ny fizarazarana isan-karazany ao anaty compartments. Miaraka amin'ny fikambanan'ny toerana be dia be, ny tsiambaratelo dia mety misy ao amina takam-bato.
Biraon'ny Birao Endrika Fampirantiana / Varotra Ny Atiny Eran-Tany Ara-Barotra Mitsangatsangana Momba Ny Toyota Fivarotana Ny Trano Fisakafoanana Ny Trano Fisakafoanana